Xildhibaan Cashuur 10% oo laga Qaado Magaalooyinka Gobolka Awdal ku Sifeeyay Xaaran - Wargane News
Home Somali News Xildhibaan Cashuur 10% oo laga Qaado Magaalooyinka Gobolka Awdal ku Sifeeyay Xaaran
Xildhibaan Axmed Barkhad Obsiiye, kana mida mudanayaasha golaha wakiillada Somaliland, ayaa sheegay in cashuur ka badan 10% magaalooyinka kale ee dalka laga qaado guryaha iyo kirooyinka magaalada Borama, isaga oo taasi ku tilmaamay mid xaaran ah.
Sidoo kale waxa uu xusay markii ay arrintaasi si dhaw ugu kuurgaleen in ay bahda cashuuraha bariga ee magaalada Borama ay u sheegeen in la ridayo ama la eryayo haddii ay Beer-sentayjka dheeriga keeni waayaan.
Waxaa uu xildhibaanku soo jeediyay lacagtaas dheeriga ah ee laga qaadayo gobolka Awdal laga daayo, islamarkaana arrinkaasi dib u eegis lagu sameeyo.
Xildhibaan Axmed Barkhad Obsiiye isaga oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa uu yidhi. “Ta kale waxaa aan soo qaadanaya cashuuraha bariga ee gobolka Awdal, cashuuraha bariga ee gobolka Awdal waxaa laga qaada beer sentayj ka sareeya kuwa gobollada kale laga qaado, 10% ayaa laga qaada guryaha iyo kirooyinka, sannadkii hal bil ayaa laga qaada, magaalada Borama waxaa laga qaada hal bil iyo badh.
Arrintaasina markii aanu dib u raacnay ee aanu u kuurgalnay, ee aanu aragnay cashuuraha bariga waxaa ay yidhaaheen ‘haddii aanu lacagtaasi lacag ka yar soo xareyno, waala I ridaya oo waa nala eryayaa, taasina waa xaaran in lagu qasbo, lacag intaas le’eg keen, oo dadka ka soo qaad waa xaaran weeyi, marka waxaan leeyahay gobollka Awdal ha loo kuurgalo, hana laga daayo cashuurta dheeraadka ah, ee laga qaadayo, waanu ka xunahay oo sumcad dil ayaanu u arkaynaa, sababto ah marka la yidhaaho qolana bil ayaa laga qaadaya annaga bil iyo badh nalaga qaado miyaanay xaaran aheyn, inamadiina lagu khasbo oo la yidhaaho waa lagu eryayaa haddii aad lacag intaas le’eg keeni waydo,”